कार्तिक ५ कठमाडौं । भूत छ कि छैन ? भन्नेबारे धेरैका धेरैथरी दाबी होलान् । विज्ञानले भूतप्रेतको अस्तित्वलाई पूर्णरुपमा नकार्दछ । तर पनि दुनियाँका धेरै मानिसहरु भूतप्रेत रहेको विश्वास गर्दछन् । भूत यथार्थमा होस् वा नहोस् तर धेरै मानिसलाई भूत […]
माघ १४,कालिकोट । तपाईहरुले यदि घरमा कुकुर पाल्नु भएको छ भने निकै सजक हुनु पर्ने भएको छ । आफ्नै घरमा पालेको कुकुरले घरकै वालवालीकाहरुलाई सुताएको समयमा टोकेर मासु नै खान्छ भनेर कसलाई पो थाहा हुन्छ र ! सावधान ! सोमवार […]
भाद्र ३०, काठमाडौं । भारतको मध्य प्रदेशस्थित सागर जिल्लामा रहेको रहली गाउँमा बस्ने ७४ वर्षीय श्यामलाल यादवको टाउकोमा सिंग उम्रेको छ । हालै त्यस सिंगलाई शल्यक्रिया गरेर हटाइएको छ । केही वर्षअघि शिरमा चोट लागेपछि सिंग निस्केको यादवले बताउनु भयाे […]
एजेन्सी । आलुको सेवनबाट दिर्घायु बन्ने खबर कहिल्यै सुन्नु भएको छ ? यदि छैन भने यो खबरले तपाईको आयु नै बढाउन मद्धत गर्नेछ । प्रसंग हो दिर्घायु बनाउने आलुको । जसलाई बैज्ञानिकहरुले केही वर्ष खर्चेर सफल परिक्षण गर्न सषम भएका […]